नेपालगाथा २०७७ फाल्गुण १३ गते बिहीबार १२:४६:११ मा प्रकाशित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालगत्तै लड्डु बाँडेर खुसियाली मनाउनु भएका नेकपा प्रचण्ड–माधव समुहमा फेरि निरासा छाएको छ । अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाइने भयो भन्दै खुसियाली मनाउनु भएका प्रचण्ड र माधव कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेपछि निरास बन्नुभएको हो ।
‘ओली फालेर म आफै प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्दै प्रस्ताव लानुभएको छ, अहिले मलाई छक्याउने कुरा गर्ने ? पहिला पनि धोका भइसक्यो, अव फेरि धोका खानु छैन,’ प्रचण्डलाई देउवाको भनाई उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो । यस्तै देउवाले आफ्नो पार्टीमा जसरी कांग्रेसभित्र नेतापिच्छे खेल्ने काम नगर्नसमेत सचेत गराउनु भएको थियो ।
प्रचण्डले कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने भन्दै कानमा चिनी हालेपछि देउवाले यस्तो कुरा उठाएको स्रोतको भनाई छ । केही समयअघि देउवाले सार्वजनिक रुपमा नेकपाभित्रको समस्याले कांग्रेसमा पनि समस्या पार्न थालेको बताउनु भएको थियो ।
बुढानिलकण्ठ स्रोतका अनुसार भारतको योजना ओली फाल्ने र आफूलाई पनि प्रधानमन्त्री हुन नदिने रहेको बिषयमा देउवा प्रष्ट हुनुहुन्छ । भारत आफ्ना तीन बिश्वासपात्र डा. बाबुराम भट्टराई, महन्त ठाकुर वा माधवकुमार नेपालमध्ये एकलाई प्रधानमन्त्री बनाउने योजना बनाएरै कांगेसभित्र र नेकपामा खेलिरहेको सूचना पनि देउवाले पाइसक्नु भएको स्रोतको भनाई छ ।
देउवाको कुरा भन्दा आफना थुप्रै सांसद प्रधानमन्त्री ओलीतिर नै लाग्ने त्रासले पनि प्रचण्ड र माधवलाई सताउन थालेको छ । सोही कारण उहाँहरुले काठमाडौं नछाडन भन्दै सांस्दलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।